यी खानेकुरा खानुस् , सुपर कम्प्युटरजस्तो तेज दिमाग भएको सन्तान जन्मन्छ ! – Complete Nepali News Portal
मंगलबार, ०८ असार २०७८
यी खानेकुरा खानुस् , सुपर कम्प्युटरजस्तो तेज दिमाग भएको सन्तान जन्मन्छ !
ScotNepal March 31, 2019
गर्भावस्थामा नै बच्चाको दिमागी विकास शुरु हुन्छ । यस्तोमा शिशु कत्तिको बुद्धिमान् हुन्छ भन्ने कुरा आमाको खानेकुरामा धेरै हदसम्म निर्भर गर्छ । यस्तोमा तेज दिमाग भएको बच्चाको लागि गर्भवती महिलाले आफ्नो खानामा यी कुराहरु समावेश गर्नु जरुरी हुन्छ –
अण्डा – अण्डामा कोलिन नामको तत्व हुन्छ, जुन दिमागको विकासको लागि जरुरी हुन्छ । यसबाट स्मरणशक्ति पनि बढ्नका लागि सहयोग पुग्छ । साथै अण्डामा आइरन र प्रोटिन पनि हुन्छ । यो पनि दिमागी विकासको लागि निकै जरुरी हुन्छ । यो अण्डाको पँहेलो भागमा पाइन्छ । त्यसैले अण्डाको सबै भाग खानु जरुरी हुन्छ ।
पालुङ्गो– गर्भावस्थामा खानामा पालुङ्गो निकै फाइदाजनक हुन्छ । यसमा रहेको फोलिक अम्ल डीएनए र कोषको संरचनाको विकासको लागि निकै फाइदाजनक हुन्छ । पालुङ्गोमा प्रोटिन, फाइबर, भिटामिन र अरु धेरै किसिमको प्रोटिन हुन्छ, जुसले दिमागको विकासको लागि सहयोग गर्छ । यद्यपि पालुङ्गोलाई निकै राम्रोसँग पकाउनु जरुरी हुन्छ ।
दाल– दालमा पनि भरिपूर्ण मात्रामा प्रोटिन हुन्छ । गर्भावस्थामा दालमा घिउ हालेर खाने सल्लाह दिइने गरिन्छ । गर्भावस्थामा दाल खानु निकै जरुरी हुन्छ । दाल आइरनको पनि राम्रो स्रोत हो ।
दही– दहीमा पनि उल्लेख्य प्रोटिन हुन्छ जसको कारण गर्भावस्थाको समयमा दहीलाई खानामा राखिनु जरुरी हुन्छ । यससँगै भ्रूणको दिमागको विकासमा सहयोग मिल्नेछ ।
एभोगाडो– मानिसको दिमाग ६० प्रतिशत बोसोले बनेको हुन्छ । यसका लागि फ्याटको जरुरी हुन्छ । जुन, एभोगाडोमा भरपूर मात्रामा हुन्छ । यसमा मानोअनसेचुरेटेड फ्याट पाइन्छ । यसबाट दिमागको विकासमा सहयोग पुग्नेछ ।
फर्सीको बिऊ – फर्सीको बियाँ पनि गर्भावस्थामा खानु निकै फाइदाजनक हुन्छ । यसमा जिंक पाइन्छ, जुन बच्चाको दिमागी विकासकोलागि अत्यन्तै जरुरी हुन्छ । यसलाई सलादको रुपमा पनि खान सकिन्छ ।
बदाम– गर्भावस्थामा बदाम खानु पनि बच्चाको दिमागी विकासको लागि निकै जरुरी हुन्छ । यसमा प्रोटिन, फ्याट, भिटामिन बी र फोलेट पाइन्छ । यसमा भिटामिन ई पनि हुन्छ ।
मृ त भेटिएकी १८ वर्षे युवतीलाई
एउटी युवतीका २ जना श्रीमानको जम्काभेटमा
मृत फेला परेकी १८ बर्षकि सेजलका
भ्याक्सिन नेपाल मै उत्पादन गर्न सुरु
आजदेखि लकडाउन खुकुलो भएको छ |
किच,कन्नी निस्केको चि,हानमै पुगेर गाउँलेले यस्तो
किच,कन्नी सङ राती बियर खाएको र
NRNA वेल्जियम को महासचिव मा कमल
धरानमा फेरि पर्यो डरलाग्दो ग्याङ फाइट, खोलाको बगरमा हानाहान पर्नुको...
कोरोना महामारीको दोस्रो लहर ओह्रालो लागेको छ | अब जनजीवन...
उसिनेको अण्डा खाएपछि भुलेर पनि नखानुहोस् यी ४ चिज, फेरी...
नेपालमा अकबरे खुर्सानी ,उत्पादन र उपयोगिता